अनशन २३ औं दिनमाः डा. केसीले औषधि लिन मानेनन्, सरकार प्रवक्ता भन्छन्– वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन — Motivatenews.Com
अनशन २३ औं दिनमाः डा. केसीले औषधि लिन मानेनन्, सरकार प्रवक्ता भन्छन्– वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन
माघ १७, काठमाडौँ – १५ औँ अनशनका क्रममा आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै २२ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्न थालेको छ । पटक–पटकको अनशनको कारण केसी यसपटक झनै गलेको चिकित्सकले बताएका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
नेकपाभित्र के भइरहेको छ ? महासचिव पौडेलले खोले गम्भीर रहस्य
एकैदिन थपिए १७९० कोरोना संक्रमित, काठमाडौंमा कति ?
आफ्नै हजुरआमाको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ
भारतबाट बिजुली ल्याउने तयारी
हवात्तै घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुदैछ कारोबार ?